MAHATSINJO - MAHAJANGA : Ombivavy bevohoka nisy nangalatra sy namono
Ny fatin’ilay omby sisa hitan’ny fokonolona. Efa nesorina ny nofony sasany fa mbola betsaka ny tavela teo. 10 juillet 2019
Nentin’izy ireo ihany koa izay azon’ireo mpangalatra nalaina. Teo ihany koa ny zanany mbola tany anaty kibony. Ny alahady 7 jolay teo no nahitana azy io, ka nampandre ny sefo fokontany ny sefo sektera.
Nampandre ny tomponandraikitra sy ny tompon’omby ary ny mpitandro filaminana ny sefo fokontany. Nomen’ny tompony nozaraina ho an’ny fokonolona moa ny hena sisa tavela. Raran’ny lalàna ny famonoana omby vavy mba hiarovana azy tsy ho lany taranaka. Sompatra sy fitiavan-kely kosa ny an’ireo mpangalatra izay efa karohina amin’izao.